Xerada Qaxootiga Badbaado | News From Somalia
Category Archives: Xerada Qaxootiga Badbaado
MOQDISHO:-Tarsan oo la yaabay Isbaarooyinka Muqdisho la soo dhoobay!!
Posted on May 23, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Tarsan ayaa ka naxay isbaarooyin cusub oo lasoo dhigay Xaafado kamid ah Magaalada Muqdisho kuwaa oo lacago baad ah looga qaado gaadiidka xili amaankii Moqdisho la soo waayay,waxaana maalmahan raaf lagu hayay dadka shacabka oo Moqdisho ku nool!.
Tarsan ayaana sheegay in Isbaarooyinkan cusub ee lasoo dhigtay xaafadaha gaar ay dhigteen ciidamo gaar ah aan cidno ka amar qaadan kana tirsaneen Ciidanka Dowlada , waxa uuna ku hanjabay in dhawaan tilaabooyin adag ka qaadi doonaan Raga hubeesan ee isbaarooyinka soo dhigtay Qeybo kamid ah Muqdisho!.
Hadalka Tarsan ayaa ku soo aadaya ay soo badanayaan maleeshiyo Beeleedka dowlada oo boob iyo kufsi ku haya dadka shacabka oo Moqdisho.
Maleeshiyaadka Dowlada oo Dumarka iyo caruurta oo lagu kufsado magaalada Muqdisho.
“waddooyinka oo laxiro ammaan laguma ilaalin karo laakin waxaa loo baahanyahay in ciidan nabad sugid ah lahelo”ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho qaarkood waxaa laga mamnuucay gaadiidka shacabka kaliya waxaa isticmaala gaadiidka AMISOM iyo kuwa DF-ka,wadada Makka Al Mukaramah ayaa isku bedeshay mid faaruq ah iyadoona isgoyska KM4 uu yahay mid dadku sit eel teel ah ku isticmaalayaan.
Halkan ka dhagayso Tarsan oo qiraya Isbaarooyinka daadsan Muqdisho MP3
WARBIXIN:-Muddo Laba Bil Gudahooda waxaa Dowladda ka goostay 210 Askari.
“Marka Tusbax Afka laga Furo waxay natiijadu noqonaysaa in tusbaxu uu kala firdhado sidaasi ayay noqdeen Maleeshiyo beeleedkii ee u hiilinayay ciidamada Xabashida ee ku sugan Bay iyo Bakool”Sidaa waxaa yiri Suxufi ah oo la socday xaalada ay ku sugan yihiin Maleeshiyaadka Dowlada federaalka oo iska kala tagaya!.
Tan iyo Markii Dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday in Ciidamadeeda ay kala baxayso gudaha Soomaaliya waxaa shaqada Ciidan ka tagay in ka badan 200 oo Askari kuwaasi oo ay soo tababartay Dowladda Itoobiya.
Maleeshiyaadka goostay ayaa ka baxsaday Gobalada Gedo, Bay iyo Bakool oo ciidanka Itoobiya ay bilaabeen inay si tartiib ah kaga baxaan.
Sababaha Maleeshiyaadku ay ubaxsanayaan ayaa lagu macneeyay rasaasta oo ku kululaatay iyo Ciidamada Xabashido ay ka barbar dagaalamayeen oo ku wargaliyay inay is difaacaan maadaama ay ka baxayaan Bay iyo Bakool.
Ciidanka Itoobiya markii ay ka tageen Xudur ayaa waxaa la sheegay wixii xiligaasi ka danbeeyay in ay Shabaabku isku dhiibeen Maleeshiyo Beeleed ka badan 60 Askari oo lasoo xariiray Eheladooda.
Shalay oo ugu danbeysay Lix askari oo kasoo goostay Dowladda ayaa lagu soo bandhigay iyagoo sheegay in Todobo Askari oo Asxaabtooda kamid ahaa ay usheegeen inay kasoo daba tagayaan.
Maalmo ka hor Diinsoor ayaa waxaa lagu soo bandhigay 10 Askari oo Qoryahooda wata kuwaasi oo kasoo goostay Dowladda Federaalka.
Isku celcelis ahaan xogta iyo macluumaadka la helayo ayaa xaqiijinaya Maleeshiyaadka Dowladda ka goosatay ee Bay iyo Bakool xiligaan gaarayaan 210 Askari kuwa kalana la sheegayo inay raadinayaan wadiiqadii ay ku baxsan lahaayeen.
BAYDHABO:-Maleeshiyo Beeleedka Dowlada oo isku horfadhiya duleedka Baydhabo.
Posted on May 22, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Markii ay ku fashilmeen Maleeshiyo beeleedka Dowlada Xamar degan ee la dagaalka kula jirta Shabaabka waxaa sii kordhay kala shigiga iyo is Aaminaad la’aanta dhexdooda ah!.
Dhanka bari ee magaalada Baydhabo waxaa lagu soo waramayaa inay isku horfadhiyaan Maleeshiyo Beeleedyo kawada tirsan DF-ka ee Soomaaliya kuwaa oo maalmihii danbe xiisada u dhaxeysay si aad ah looga dareemayay magaalada Baydhabo iyo Duleedka magaalada .
Mid ka mid ah maleeshiyaadka isku horfadhiya duleedka magaalada waxay ka amar qaataan dagaal ooge Xaabsade oo Xamar jira, halka kuwa kale aan si dhab ah loo shaacin cida ay ka amar qaataan hase yeeshe sida wararka la helayo tilmaamayaan waa kuwo wata Magaca beesha Hariin ee ka mid ah beelaha dega gobolada Bay iyo Bakool.
Warar kala duwan ayaa laga helayaa waxyaabaha dhaliyay in maleeshiyaadka Ka tirsan Df-ka ee qaab beel ahaanta u Abaabulan ay isku horfadhiyaan duleedka magaalada Baydhabo wararka qaar ee sida hordhac ahaanta ah loo helayo ayaa ku Waramaya Inay jiraan dhul labada dhinac kala tabanayaan oo ay xiisadooda salka ku hayso.
Ugu danbeentiina maamulka Df-ka ugu magacaaban magaalada Baydhabo oo isku dayay inow kala dhexgalo labada dhinac ayaa ku fashilmay inow xaliyo waxyaabaha ay kala tabanayaan.
Odayaal colooshood u shaqeytayaal ah oo tira ahaana gaarayay 14 oo maamulka Df-ka ee magaalada Baydhabo u xilsaaray Inay xaliyaan colaada labbada maleeshiyo ayaa maalintii shalay ahayd xabsiga magaalada Baydhabo la dhigay kadib markii ay Ka dhego Adeegeen awaamiir maamulka Df-ka ee Baydhabo uu dul dhigay taas oo fareysay inay so qiimeeyaan dhulalka Labada dhinac ay isku hayaan.
By:- Yuusuf Caato.
DHAGEYSO:-Malaaq Showri iyo Shacabka Muqdisho oo ka Cabanaya Raafka Ciidamada Shisheeye Iyo Maleeshiyo Beeleedka Moqdisho.
Waatii aan Idin soo gudbinay Dhalinyaradii Magaalada Muqdisho oo sidii Awrtii la isku xiriirsaday, hadda waxaa qaylo Afka ku shubtay oo yiri Anigaa Qori Wiil yar igu fiiqay oo dariiqa mari waayey, Malaaqa Xamar iyo Xamar Daye Malaaq Cali Malaaq Coloow Malaaq Showri, sidoo kale Shacabkii ayaa ka warbixiyey xattaa in Diintii Islaamka laga cararayo, Oday Macalin Dugsi ahaa ayey Murtadiintu gurigiisa Albaabkiisa ka qabteen markaas ayuu yiri, “Anigu Macalin ma ahi Dugsina waligay ma dhigin”.
Macalin kaas wuxuu maqlay Macalimiinta Dugsiyada ayaa Madaxa laga tooganayaa, xaggee joognaa Maantay Qofkii Ilaahay Quraankii dhigayey markii sidaas yiraahdo?, waa maxay dulinimada kaweyn oo Shacabka Soomaaliyeed ku habsatay?. Dad badan waxay ku leeyihiin Xassan Gurguurte ayaa Nabadkeenaya iyo kuwa duliga la shaqeeya.
Qofkii Diin iyo Caqli leh waa garan garaa sida Nabadda iyo Hormarka lagu gaaro, Magaalada Muqdisho wakhtigii Maxkamadaha Islaamigaa waa la ogaa 6dii Bilood Nabadda iyo Macaanka Walaaltinimada Islaamkaa sida Qofkasta u Arkay, xattaa gaalada ayaa ka sheekaysa oo Buugaag ka qoray, markii gaaladii ogaatay Diinta Islaamka oo aan hirgalino ayey noosoo dureen Wiilal Masiixiyeena oo Baybalkooda Xerada Xalane ka Akhrinaya.
Cali Xaamud Ninka Afhayeenka Ciidamada Shisheeye u ah Qofkii aan ogayn ha ogaado waa Masiixi Afsoomaali ku hadlaya, markaan gacan kadhiganay kaas oo kale ayaa Ilaahay duleeyey Dad badan, Soomaaliyey Waligeen Naxariis Ilaahay Arki mayno inta aan diidan nahay hirgalinta Shareecada Islaamka kudhaqan keeda.
Dhagayso MP3 Halkaan Riix Ama Guji
Isha Maqalka Alfurqaan.
Abwaan Raage:- “Caadil mooye cid kale laga cabsooneynin”
MOQDISHO:-Booliiska Amisom oo oday dhagool ah ku dilay Muqdisho.
Posted on May 21, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Qofka waayeelka ah oo ay dileen Ciidamada Shisheeye ayaa marayay meel udhaw Xarunta danbi baarista oo u dhaw Hoteel Saxafi ee Magaalada Muqdisho.
Askarta shisheeye ayaa isku dayay inay istaajiyeen waayeelka laakin ma uusan maqli karin iyagoo ugu danbeyntii ka toogtay qaarka hore jirka gaar ahaan wadnaha durbana goobta ayuu ku naf baxay..
“Wuxuu ahaa oday dhagool ah oo aan waxba maqal,wuxuu ahaa nin ay la hadleen Askarta Booliiska Amisom laakin uma uusan jawaabi karin taa oo keentay in gacantooda uu ku baxo” sidaasi waxaa sheegay Axmed Muuse oo Awooogiis ay si bareer ah u dileen Ciidamada Shisheeye ee ku soo duulay dalka Soomaaliya.
Ciidamo Booliis ah oo ka tirsan shisheeyaha Amisom ayaa maanta boqolaal dhalinyaro ah ka raafay Muqdisho iyagoo la isagu geeyay xarunta danbi baarista C,I,D ee Muqdisho.
Dadka la qabtay ayaa waxaa ku jira dhalinyaro wax ka barta jaamacadaha iyo iskuulada Muqdisho.
Howlgalka ayaa ahaa Mid kadis ah iyadoo dadka la raafay guryaha,wadooyinka iyo masaajida ku yaala degmada Wardhiiglay oo howlgalka xoogiisa uu ka dhacay.
howlgalka maanta ayaa daba socday weerar madaafiic ah oo habeen hore lagu qaaday madaxtooyada halkaasi oo ay ku dhinteen shan Askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee Amisom.
DHAGEYSO-DAAWO SAWIRADA:- Wilaayada Sh/hoose oo Wax Ka Qabatay FatahaadaWabiga Shabeele.
Posted on May 20, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Waaliga maamulka islaamiga ah ee Sh/hoose Sheekh Maxamad Abuu Cabdallaah oo inoo waramay xilli uu ku mashquulsanaa hawsha ayuu sheegay wabigu dhowr meel ka fatahay laakin Allaah ku guuleeyay iney wax ka qabtaan.
Wuxuu sheegay in shaqaale badan la galiyay dhulka biyuhu kusoo jabsadeen haddana la marayo heer gabagabo ah.
Sidoo kale wilaayada Sh/hoose ayaa ballaarin ku sameysay wabiga iyadoo laga hor tagayo fatahaad uu mar kale sameeyo sida uu inoo sheegay Al-Waali Sheekh Maxamad (Abuu Cabdallaah).
Kannaalo iyo faraha biyaha siiya beeraha ayaa kamid ah meelaha wilaayadu dayac tirka iyo dib u dhiska ku sameysay.
Halkan kala dag Abuu Cabdallaah
XIGASHO,WAXAANA XUQUUQDA SAWIRADA LEH RADIO ALFURQAAN.COM
DAAWO:Al-Kata’ib oo Filim Kasoo Saartay Dagaalkii Dhoobleey,Jubbada hoose.
Mu’asasada Al-kata’ib ayaa soo saartay qeybtii 2-aad ee isdaar maqal iyo muuqaal ah oo ku saabsan dagaaladii malxamadda ahaa ee ciidanka muslimiinta Jubbada Hoose kula galeen cadawga Kenya ee dalka kusoo duulay.
MOQDISHO:-Madaafiic xalay lala helay Xarunta Villa Soomaaliya iyo Federaalkii oo fadhiid ah!
Guutada Madaafiicda Xanbaara ee xarakada Shabaabul Mujaahiin ayaa xalay dhowr gantaal u diray Xarunta Madaxtooyada Muqdisho ee Villa Soomaaliya oo saldhig ah Madaxda Dowladda Federaalka.
Madafiicda ayaa ku hoobatay qeyb kamid ah Madaxtooyada xili shir uu usocday Xasan Gurguurteiyo Saraakiil Cadaan ah.
Lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay madaafiicda oo hoobiyayaal ahaa kuwaasi oo sidii roobkii ugu hoobtay Villa Somalia.
Saraakiil ka tirsan Dowladda ayaa Aaminsan in Muqdisho xalay laga dhex duqeeyay xarunta Madaxtooyada iyagoo saaka ku yaacay qeybo kamid ah Degmada Wardhiiglay ee Muqdisho.
Ciidamada xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa dhowr mar horay hoobiyayaal ugu garaacay Villa Soomaaliya.
Dhanka Dowladda iyo shabaabku wax war ah kama aysan soo saarin madaafiicda xalay ku hoobatay Aqalka Madaxtooyada.
In Muqdisho dhexdeeda laga duqeeyo Madaxtooyo oo si weyn loo waardiyeeyo ayaa ka dhigan in amaan ka ahayn, shabaabkuna qeybo kamid ah ay la maamulaan,taaso si iska cad dadka Moqdisho ku nool.
VIDEO IGA YAABSHAY:-Gabar Soomaaliyeed oo Tv-ga ka sheegtay inay Tumasho diyaar u tahay!!
Posted on May 19, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Nimco waa Soomaali kuna nool dalka Netherland ama Holand ayaa noqotay mid ku Tumatay dhaqanka iyo diinta ummada Soomaaliyeed, kadib markii ay barnaamij caan ah oo ka baxa Telefishin caalami ah oo laga leeyahay dalka Netherlands ay la baxday nin cadaan ah oo Tv-gu keeneen barnaamijka la yiraahdo TAKE ME OUT!.
Inta hartay Somali ayaa u daayay iyo Video-ga iga yaabshay!!
Gabadh Soomaali ah oo Dalbanaysa Gaal Latunta!!
“Dulli kama Baxaysaan hadii DIINTA lagu laaban”
“Anaa diiday gaal daacufle ah, dabagalkiisiiye”Sayid Maxamed Cabdulle Xasan,Raxiimulaah.
Gaalada dirayska leh anaan, daabadda u qabane
Anaa diiday dagal inaan la galo, daalin ii colehe
Dalka ma lihid anigaa ku idhi, doora weynaha e
Anaa diiday nabadiisa aan, daacad noqonayne
Anaa diiday deeqdiisa ay, naari dabataale
Dahabkii uu waday waanigii, daadiyee qubaye
Dagaalkiisa anigow xishoo, daalib ku ahaaye
Durdurada Fardowsaad anaa, doortay oo rabaye
Anaan labada daarood tan hore, darajo moodaynin
Anaa diiday gaal daacufle ah, dabagalkiisiiye
Doofaarka eyga ah anaan, daarihiis galine
Sida doxorka ?# anaan, duud xamaal noqone
Anigaan dariiqiyo waddada, dowga sii marine
Anigaan dillaalkiyo arliga, duubigaw xidhane
Anigaan dariiqada Alliyo, diinta cassiyine
Daliilkii rasuulkii anaa, doonayoo helaye
Diinkayga anigaan ku gadan, dabaqii naareede
Anaan labada daarood tan hore, darajo moodayne
Markay duusho gaaladu anaan, daabbaddu rarine
Goortay dareeraan anaan, diiradda u qabane
Dadow maqal dabuubtaan ku idhi, ama dan haw yeelan
Dunjigiinba waataad kufriga, daba ordayseene
Waataad iigu daranteen markaan, diiday oo nacaye
War waatow digayseen markaan, duulan soo waco e
Waataad colaadii dorraad, iigu daranteene
Markaan diirtay waataad dushiyo, doc iga boobteene
Waataad markii aan dafaray, daaha galiseene
Waataad dushiina u rarteen, duq iyo waayeele
Waatowla daristeen sidii, duul walaalo ahe
Markaan didiyey waataad warmaha, igula duusheene
Gortaan digniintiyo ergada, idinka deyn waayey
Waataad damiin igu qirteen, dawriyoo falane
Dikriga iyo eedaanka waataad, ka durugteene
Waataad inuu dawlad yahay, dood ku bixiseene
Dibnihiina waataad inuu, dego ka sheegteene
Waa taad dariiqyada barteen, noo dadnaan jiraye
Goortuu dantiisii helee, idin dubaaqeeyey
Waataad dacluuskii Berbera, ula dawaafteene
Diihaalka waataad Hindiga, daal ka barideene
Dagaagiina waatii xeryaha, deyran loo dhigaye
Waatuu dareersaday fircoon, diracyadiiniiye
Waatuu diyaar ugu laqimay, diinta gaalada e
Damac beena weeyaan waxaad, nagu dilayseene
Waa waxaad dariiqii sharciga, uga dullaanteene
Dawgii Rasuulkiina waad, dabamartayseene
Nin dardaran iblayskii dafaa, dow ka raaridaye
Dallacaad jaceylbaad kurtiin, noola dirirteene
Dubaaqii waxaa idinka galay, daaro buuxsade e
Dawo kama heshaan faranji aad, daawo dhigataane
Dabinbuu idiin qoolayaa, waydin dagayaaye
Dirhamkuu idiin qubahayaad, dib u go’aysaane
Doodna waxaan u leeyahay dadkeer, hadalka deyn waayey
Nimanyahow damiinnimada waa, lagu dulloobaaye
Dadku wuxuu jeclaystaa waxaan, duxi ka raacayne
Nin ragay dardaaran u tahaye, doqon waa mooge
Denbi weeye Kufriga, aad u dabcaysaane
Marka horre dabkuu idinka dhigi, dumar sidiisiiye
Mugga xiga dushuu idinka rari, sida dameeraha e
Mugga xiga dalkuu idinku odhan, duunyo dhaafsada e
Mugga xigana daabaqadda wuu, idin dareensiine
Dunjigeeda Soomaalibaan, deyrka ka ahaaye
Dhaaxaan Daraawiishta idhi, doonta gaalada e
Dhaaxay asgaro uu dalbaday, dabada taageene
Dhaaxaan dabkii iyo la hadhay, duunyaduu wadaye
Dhaaxaan intaan janano dilay, soo dabaaldageye
Dhaaxaan dekado uu camiray, dumiyoo rogaye
Ninkiisa dirirta geya maalinbay, dunidu ciishaaye
Maantaan dabaaldegga iyo, darajo eegaayey
Ragga haatan igu diimayow, duxi ha kaa raacdo.